Home » အသားပေး » IBC 2017: နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်း Spotlight- InfinitySet 3!
IBC 2017: နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်း Spotlight- InfinitySet 3!
ကို virtual စတူဒီယိုအနိုင်ရဆု၏အဆင့်မြင့် features တွေ, InfinitySet3by နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ မှာပြသပါလိမ့်မည် IBC 2017 တဲ 7C12 ဘယ်မှာ၎င်း၏ဥရောပပွဲဦးထွက်အောင်လိမ့်မည်။ ဤသည်ထူးချွန်ကို virtual နှင့်လုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဖြေရှင်းချက်အဆုံးအသုံးပြုသူ, တည်းဖြတ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း, သင်တန်း၏, အလျှော့မြန်နှုန်းနှင့်အတူ High-end 2D နှင့် 3D ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးနိုင်အောင်, Aston ဂရပ်ဖစ်ဖန်တီး tool ကို-set ကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်အဆင့်မြင့်ဂရပ်ဖစ် features တွေထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဦးမည် အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း။
အဆိုပါ InfinitySet3 PBR နှင့် HDR အဖြစ်ထူးချွန်တင်ဆက်မှု features တွေရှိပြီး, ဟုတ်ကဲ့က Unreal ဂိမ်းအင်ဂျင်ကိုထောကျပံ့မညျ! သင်၏ကို Workstation မှနောက်ထပ်ဟာ့ဒ်ဝဲမလိုအပ်ပါဘူးအများစုလက်ရှိထုတ်လွှင့်တပ်ဆင်သို့ fit နိုင်ပါတယ်ထူထောင်ရိုးရှင်းသော။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သော Estudio အင်ဂျင်သည် setup ကိုပိုပြီးအရည်ဖြစ်လာသည်နှင့်အချို့သောအံ့သြဖွယ်ရလာဒ်များဖွင့်ထားသည်။
InfinitySet3လည်းထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် NAB 2017 မှာအတော်လေးအဆိုပါဘတ်ဇ်ခဲ့ကြရသောသစ်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီး Reality features တွေ, ပြပါလိမ့်မယ် VirtualGate က virtual အစုံအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာအတွင်းနောက်ထပ်အကြောင်းအရာအတွင်းပိုင်းမဟုတ်မှသာတင်ဆက်ထားသည့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် VideoCAVEတစ်ဂူမျိုးစုံပြတင်းပေါက်အဖြစ်ဖျော်ဖြေအမှန်တကယ်အစုံအတွက်မော်နီတာသုံးပြီးရောနှောထားသော Reality လျှောက်လွှာ (သင်ကယုံကြည်ဖို့မြင်ရဖို့ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ!) ။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါမေ့လျော့တော်မပေးနိုင်ပါတယ် TrackFree ™ နည်းပညာနှင့်၎င်း၏ TeleTransporter အင်္ဂါရပ်, InfinitySet3အပြန်အလှန်ဖလှယ်သည့် chroma-နှိပ်ပါခွက်တဆယ်ဘို့နောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်ကိုမှန်ကန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ input ကိုသို့မဟုတ် Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသုံးနိုင်သည်သော်လည်း။ ချောမွေ့စွာအဆိုပါပြောင်းလဲပေးသောလုံးဝထူးခြားသော 3D တင်ဆက်မှုအင်္ဂါရပ်မှအစိတ်အပိုင်းအတွက်အစစ်အမှန်နှင့်ကို virtual ဒြပ်စင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်အနေဖြင့်ဤသည့်အချိန်တွင်မဆိုတရားဝင်ကို virtual အချိန်နှင့်အာကာသခရီးသွားဖြစ်လာနှင့်မည်သည့်ဝေးလံခေါင်ဖျားတည်နေရာ Tele-ပို့ဆောင်ဖြစ်ဆိုအခွက်တဆယ်များအတွက်အခြေခံသတ်မှတ် အပြည့်အဝ 3D အရာဝတ္ထုသို့အခွက်တဆယ်!
ဒါ့အပြင် display ကိုအပေါ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်ထား VisualMediaအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးလူမှုမီဒီယာ Feeds နဲ့ဒုတိယ screen ကိုဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီး Real-time 3D ဂရပ်ဖစ် visualization များကိုတစ်ပူးတွဲဖြေရှင်းချက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ နှင့် never.noအတော်လေးအထင်ကြီးအတွက် data တွေကိုမောင်းနှင် 3D ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်၏စနစ်တကျလူမှုမီဒီယာသတင်းအချက်အလက်, ဒီ Real-time ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံး '' မိတ်ဖက်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည် '' စီမံကိန်း VisualMedia '' မှဖွံ့ဖြိုးပြီး ဥရောပ 2020 Horizon ပလက်ဖောင်း နှင့်ပွဲဦးထွက်အတွက်ကြိုတင်က၎င်း၏စီးပွားရေးအရရန်၎င်း၏နောက်ဆုံး configuration များအတွက်ပြသပါလိမ့်မည် ဇန်နဝါရီလ 2018 ။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ SmartSetအသေးစားနှင့်ဒေသခံတီဗီဘူတာများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ template ကို-based ကစားထွက်ဖြေရှင်းချက် features များနှင့်ခြစ်ရာကနေသူတို့ကိုဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအဆင့်မြင့်ရဲ့ Virtual သတ်မှတ်ရန်နှင့်တိုးပွား Reality applications များပေးပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူရဲ့ template ကိုဖြေရှင်းချက်ဝေဟင်မှအကြောင်းအရာများထွက်ကစားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ applications များထံမှ created နှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်ထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်စီမံခန့်ခွဲမှုရှာနေလျှင်ထို့နောက်သစ်ကိုဘက်ပေါင်းစုံ, MOS-based template ကို-based system ကို checkout BrainNews, ရာသတင်း application များအတွက်ရှုပ်ထွေးဂရပ်ဖစ်ဘို့ခွင့်ပြု, အခုသင့်ရဲ့ On-ဝေဟင်ဂရပ်ဖစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အများအတွက်, ခေတ်မီ MOS-သဟဇာတဖြစ်လာဖို့သတင်းကဏ္ဍကျော်လွန်။ ဒါဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူအားဖြင့်တဦးတည်းအစွမ်းထက်သည့်စနစ်ဖြစ်ပြီး, ဒီဇိုင်နာများအနေဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ် input ကိုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ Real-time, အရည်အသွေးမြင့် 3D ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ပေးပါသည်။
1967 ကတည်းက IBC ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, ဖန်တီး, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများ၏ပို့ဆောင်မှုအတွက်စေ့စပ်ပညာရှင်များများအတွက်သြဇာအရှိဆုံးနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်လာမှစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ မူလကနိုင်ငံတကာအသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း, IBC ယင်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်သည်အမြစ် မှစ. ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးယနေ့ကအလိုအလျောက် Workflows ကနေအမြင့်ဆုံး resolution ကဖမ်းယူခြင်းနှင့် display ကိုမှ, အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာကနေဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံမှ, မီဒီယာဖန်တီးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဖြန့်ဝေ၏တပြင်လုံးကိုအနံလွှမ်းခြုံ။ IBC စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ရပ်ဖြစ်နေဆဲ, ထိုသို့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကနေသွားကြဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ဒါဟာယခု 55,000 နိုင်ငံများထက် ပို. အနေဖြင့်ရေးဆွဲထက်ပို 170 တက်ရောက်, အမ်စတာဒမ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုစက်တင်ဘာလဆွဲဆောင်။ အဆိုပါ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်နည်းပညာကွန်ဖရအရေးကြီးဆုံးအသစ်ကစဉ်းစားတွေးခေါ်ကိုဖွင့်ဖို့ရာအရပျနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ IBC ညီလာခံ၏အခြေခံအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ပါမောက္ခဘရိုင်ယန်ကော့နှင့် will.i.am. အဖြစ်ကွဲပြားအဖြစ်ပဲခေါင်းဆောင်များပေမယ်လငျးအိမျထုတ်လွှင့်မပေးဆွဲဆောင်ခဲ့ကြရသောပြား, ဆွေးနွေးချက်များနှင့်အဓိက၏ကျယ်ပြန့်-အထိအစီအစဉ်နှင့်အတူထိုင်သောနည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းစာများကများမှာ
အဆိုပါကွန်ဖရတစ်ဦးချင်းစီကနည်းပညာအတွက်အနုပညာပြည်နယ်ပြ, ပြသခဲ့သည် 1,600 နီးစပ်သူအတူတကွဆောင်တတ်၏ရာပြည့်စုံပြပွဲနှင့်အတူလိုက်ဖက်သည်။ IBC အသိပညာဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်မျှဝေဖို့နေရာတစ်နေရာအဖြစ်ပြိုင်ဘက်ကင်းသည်နှင့်၎င်း၏ကွန်ရက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်တန်ဖိုးဖြစ်ရပ်များကဆက်ပြောသည် - ဆုအနေဖြင့်ရုပ်ရှင်ပြမှ - တကယ် attending.To များ၏တန်ဖိုးရှိအထောက်အကူပြုဒီအသစ်နှင့်အကျယ်တိုးချဲ့စျေးကွက် IBC ဖန်တီးဆက်လက်၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်း အဆိုပါသစ်ကိုအကြောင်းအရာမျိုးဆက်နှင့်မီဒီယာနည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သူတို့ခြေကိုရှာဖွေကူညီပေးနေရည်ရွယ်မြင့်တက် Stars အစီအစဉ်၏နိဒါန်းနှင့်, သီးသန့်ဖိတ်ကြားချက်ကိုသာခေါင်းဆောင်များ '' ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပါအဝင်ယင်း၏ပရိသတ်တွေ, 150 ခေါင်းဆောင်များအဘို့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆန်းသစ်နည်းလမ်းများ အနာဂတ်မဟာဗျူဟာပုံဖော်သည့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း။ နေရာတိုင်းမှာ IBC အကြောင်းအရာ - - သစ်ကိုလမ်းညွန်အတွက် IBC ရဲ့ထူးချွန်ယူရာ IBC လည်းဖြစ်ရပ်များ၏အသစ်တစ်ခုစီးရီးဖန်တီးထားသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းများက run IBC ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာအားလုံးသည်သည်, ချိတ်ဆက်အနာဂတ်မှကြည့်သောဤအသစ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်။ IBC အကြောင်းအရာနေရာတိုင်းမှာချိတ်ဆက်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာလောက၏အပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ IBC လိုပဲကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအတွက်ဖိုရမ်ထောက်ပံ့နည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအခွင့်အလမ်းများ, ဒါပေမယ့်နေရာတိုင်းမှာ IBC အကြောင်းအရာကထူးခြားဂရုတစိုက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ကြည့်ပေးခြင်းတစ်ဦး IP ကိုကမ်ဘာပျေါတှငျမီဒီယာဆက်သွယ်မှုများအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့သဘာဝကိုထင်ဟပ်ခြင်းနှင့်ခံစားရသည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-09-06
ယခင်: ထိုင်ဝမ် Broadband ဆက်သွယ်ရေးသဟဇာတ မှစ. ဒုတိယအ Cable ကို TV ကဗီဒီယို Delivery စနစ်ဖြန့်ချထား
နောက်တစ်ခု: အင်တာနက်ကိုတစ်ဦး Borderless Service ကိုသိမ်းဆည်းထားပါရန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းဒါဟာင်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "IBC 2017: နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်း Spotlight- InfinitySet 3" ။ http://www.broadcastbeat.com/ibc-2017-product-spotlight-infinityset-3-by-brainstorm/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။